Machining Factory, Alaab -qeybiyeyaasha - Shiinaha Machining Manufacturers
Dhammaan taxanaha biraha shaabadaynta
Dhammaan taxanaha nin machining ...
Dhammaan taxanaha caadadii fur ...
Adeegga taageeraya dhammaan ...
CNC machining p naxaas yar ...
Dhammaan taxanaha waxsoosaarka mashiinka
Qalab: Cr12 45# qalabka wax -qabadka birta: goynta siligga, ka -baaraandegga saxda ah ee looga baahan yahay Xaqiijinta: 0.01mm Shuruudaha isbarbar -dhiga Gear: 0.02mm Daaweynta dushiisa: madoobaanta, daaweynta heerka sare, daaweynta faaruqinta Xaddiga mashiinnada ee Korinta: 1. Mashiinno sax ah. 2. Qalabaynta qaybaha qalabka saxnaanta. 3. Habaynta qaybaha dayactirka ee aan caadiga ahayn. 4. Ka shaqaynta saxnaanta qaybo qaab-gaar ah leh. 5. Qalabaynta iyo farsamaynta qaybaha farsamada. 6. Daaweynta dusha makaanikada kala duwan ...
CNC mashiinnada qaybo naxaas ah oo yar
Warshadaha farsamaynta waxaa ka mid ah: dabaysha korantada fiilooyinka, goynta laser, ka shaqaynta culus, isku xidhka biraha, sawirka birta, goynta plasma, alxanka saxda ah, sameynta duudduuban, biraha birta qalooca, been abuurka, goynta biyaha biyaha, alxanka saxda ah, iwm. waxaa loola jeedaa habka waxsoosaarka wax soo saarka hab farsamo; Waxay si cidhiidhi ah u tilmaamaysaa geeddi -socodka wax -soo -saarka iyo ka -shaqaynta qaybo leh daloolo, mashiinno wax lagu shiido, mashiinno qodid, mashiinno shiid, mach shaabadaysan ...
Is -habeynta Heatsink iyadoo loo eegayo codsiga macaamiisha
Qalabka: birta aan lahayn birta titanium Daawaha wax -ka -qabashada: ka -shaqaynta Furimaha -sax, ka -baaraandegga CNC Shuruudaha saxnaanta: 0.005mm Daaweynta dusha: dahaadhka dahaarka Baaxadda Mashiinka ee Korinta: 1. Mashiinno sax ah. 2. Qalabaynta qaybaha qalabka saxnaanta. 3. Habaynta qaybaha dayactirka ee aan caadiga ahayn. 4. Ka shaqaynta saxnaanta qaybo qaab-gaar ah leh. 5. Qalabaynta iyo farsamaynta qaybaha farsamada. 6. Daaweynta dusha qaybaha kala duwan ee farsamada. Iyada oo horumarinta of computer gacanta te ...
Sax -saaraha CNC Machining Machining
Qalab: 20# birta 5052 aluminium Qalabka wax -ka -qabadka aluminium: milidda saxda ah iyo leexinta shuruudda Saxnaanta: 0.01mm Isbarbar -dhigga: 0.01mm isu -uruurinta: 0.01mm Daaweynta dushiisa: dahaadhka chrome, oksaydhka iyo madmadowga baaxadda Mashiinka ee Korinta: 1. Mashiinno sax ah. 2. Qalabaynta qaybaha qalabka saxnaanta. 3. Habaynta qaybaha dayactirka ee aan caadiga ahayn. 4. Ka shaqaynta saxnaanta qaybo qaab-gaar ah leh. 5. Qalabaynta iyo farsamaynta qaybaha farsamada. 6. Daaweynta dusha qayb farsamo oo kala duwan ...
Adeegga Qaybaha Birta ee ODM OEM
Qalab: SKD11 Qalabka wax -ka -qabashada: mashiinka wax -qallinta oo sax ah, mishiinka, farsamaynta siligga oo gaabis ah Shuruudaha saxnaanta: 0.005mm Daaweynta dushiisa: dahaarka nikkel ee Baaxadda Mashiinka ee Korinta: 1. Mashiinno sax ah. 2. Qalabaynta qaybaha qalabka saxnaanta. 3. Habaynta qaybaha dayactirka ee aan caadiga ahayn. 4. Ka shaqaynta saxnaanta qaybo qaab-gaar ah leh. 5. Qalabaynta iyo farsamaynta qaybaha farsamada. 6. Daaweynta dusha qaybaha kala duwan ee farsamada. In berrinkii processing iyo warshadaha wax soo saarka, w ...
Korinta Electronics -ka
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Guga Saxanka, Aluminium CNC Qaybo Machined, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Boolal, Dhimashada Magnesium, Sheet Birta Stamping Products, Dhammaan Alaabta